प्रचण्डले मागे प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा ! - Himalayan Kangaroo
प्रचण्डले मागे प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा !
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:२६ |
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री के.पी ओलीकै सामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार भएको त्रिपक्षीय छलफलमा प्रधानन्याधीशको राजीनामा मागिएको हो । प्रधानन्यायाधीश पराजुली एकपछि अर्को विवादमा फस्ने क्रम बढ्दाे छ । जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादको झमेला खेपिरहेका प्रधानन्याधीश पराजुलीलाई सोमबारदेखि अर्को विवाद आइलागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले प्रधानन्याधीशको गत साउनै अवकाश भइसकेको जनाउँदै सोमबार इजलाश बहिष्कार गरेपछि पराजुलीलाई अर्को झमेला थपिएको हो ।
इजलाश बहिष्कार प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले पराजुलीलाई छलफलको लागि बाेलाउनु भएको हो । छलफलमा अध्यक्ष दाहालले समस्या समाधानका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न पराजुलीलाई सुझाव दिएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार छलफलमा अध्यक्ष दाहालले इजलाश बहिष्कार बिषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलार्इ ‘यसमा केही त गर्नु पर्यो’ भन्नु भएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने न्यायाधीश चोलेन्द्रले बेञ्च बहिस्कार गरेको घटनालाई केही वकिलले अनावश्क रुपमा ‘ठूलो घटना’ बनाएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने छिमेकीको हिसाबले ‘यसो चिया खान बोलाएको’ मात्र भन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमासँगसँगै छ ।
Previousसकियो राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान, ८६३ मत खस्याे
Nextराष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी विजयी
५ भाद्र २०७४, सोमबार १४:५१
‘गोर्खाल्याण्ड नपाएसम्म आन्दोलन’
२९ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०१:२८